Rafitra fandatsahan-drà ho an'ny fanonganana eo akaikin'ny tohodrano - Ellicott Dredges
Ny fanesorana ny antsy, ny fasika ary ny vatosoa, avy ao ambadiky ny tohatra ary akaikin'ny tsikombakomba dia ilaina indrindra amin'ny fampandehanana fahombiazana ny rafi-pahefana.
Ny fananganana sedimentation dia mampihena ny famokarana herinaratra sy ny rano amin'ny tohodrano amin'ny farany, ka mitaky ny fandatsahana fandidiana mba hifehezana ny asa mahomby. Ao anatin'ireo fitoeram-pitobiana, ny famafana ny famafana dia afaka manangana miadana ary miteraka fitehirizana rano mifangaro sy olana momba ny rano.
<Series 670 Dragon® Dredge
Mampiasa fanilo iray hamongorana ny banga, dity, fasika, gravel, ary ny poti-mihetsika hafa avy ao ambadiky ny tohatra sy ny manodidina azy mitovy amin'ny rafitry ny tohodrano ho an'ny Hoover any Las Vegas, Nevada (Etazonia) na ny tohodranon'i Rappode any Alemà dia asa ilaina iray izay manome toky fampiasa mahomby amin'ny rafi-pamokarana herinaratra sy ny famatsian-drano ilaina.
Ny fikorianan'ny rano voajanahary matetika dia miteraka ny fanitran-drano matetika matetika any amin'ny toerana toa an'i Guatemala na Singapore. Ho fanampin'ny fanondrahana sira na fasika amin'ny minitra, ny fitrandrahana reserba dia iray amin'ireo fomba fanaon'ny fandriana fahalemana. Ny toeram-pivarotana dia manome dobo fisotro ho an'ny olona any Malezia ary manam-pahefana amin'ny tompon-tany any Uganda amin'ny toerana hafa eran'izao tontolo izao.
Ny vidin'ny dredging mba hitahiry ny tobim-pitobiana saika handoa ny tenany noho ny tsotra satria ny tahiry dia manompo ihany koa ny loharanon-tsakafo voajanahary sy toeram-ponenana ho an'ny zavamaniry sy biby velona. Ny fitrandrahana voajanahary, ny fandotoana rano ary ny fanodinkodinana dia samy manampy amin'ny fantsom-baravarankely misy lavaka sy fako hafa manohintohina ireo harena voajanahary ireo. Ny fanodinana dia asa fikojakojana ilaina indrindra ho an'ny tahirin-jiro manerana an'izao tontolo izao.
Na dia somary kely kokoa aza ny halavany, mbola mila fikojakojana tsy tapaka ny garazy mba hiantohana ny fahaiza-manao sy ny famokarana herinaratra. Ny dredges an'ny mpanendaka kely sy antonony an'i Ellicott dia mety tsara amin'ireto tetikasa lehibe ireto - indrindra ireo any amin'ny toerana lavitra izay tsy azo atao ny fandefasana fitaovana lehibe.
Famokarana angovo vainafo dia mampiasa Ellicott® Dredge hamoahana fitaovana fanararaotra efatra mahasoa
Article Article "Mamoaka hafatra goavambe ny arina volon'angaly"; Ny Serivisy TVA manofa tontolo iainana ara-tontolo iainana ho an'ny fanadiovana tontolo iainana ho an'ny fanadiovana ny tontolo iainana ao amin'ny Ellicott®
Rafitra fanaraha-maso mifototra amin'ny DGPS ho an'ny tetik'ady fanondrahana kely
Fitrandrahana / Sand & Gravel